Kooxda ku badda cagta ee Chelsea ayaa noqotay kooxdi ugu horreysay ee Kobka loo yaqano Champions League-ga haysato hadana Wareega Koobaad ku hartay
Dec 6, 2012 (QOL) Chelsea oo xalay Nus dar`san goolal ah ku xasuuqday kooxda Nordsjealandee ka socotay dalka Denmark ayaanan natiijadaasi waxba u soo kordhin, waxaana ay ka hartay koobka Champions League-ga oo ay marki ugu horreysay ku guuleystay xilli ciyaareedki sanadkii hore.
Chelsea ayaa laga dhigay rigooro daqiiqadii 31-aad ee qaybti hore ee cayaarta, marki daafaceeda Gary Cahil uu gacanta ku taabtay kubadda, lakin rigooradaasi waxaa badbaadiyay goolhayaha kooxda Peter Cech oo xalay hogaaminayay kooxda.
Fernando Torres ayaa Chelsea u sahlay inay nuski saaca ee hore ku nasato,iyadoo hogaanka ku heyso, marki uu u dhaliyay gool daqiiqadi 45-aad. Marki la isku soo laabtay nuski saaca ee danbe ayaa kooxda martida ahayd ee Nordsjealand ay heshay gool, waxaana u dhaliyay ciyaaryahankeeda Joshua John daqiiqadii 46-aad hayeeshee Cahil ayaa Chelsea u dhaliyay goolka saddexaad, daqiiqadii 51-aad iyadoo Fernando Torres uu 5 daqiiqo kadib na goolki afaraad dhaliyay
Oscer iyo Jauna Mata ayaa u kala dhaliyay labada gool ee kale kooxda Chelsea,iyadoo cayaartu ay kusoo dhamaatay 6-1 Chelsea ayaa sidaan waxa ay ku noqoneysaa kooxdi ugu horreysay ee ku harta wareegga Grpoup-yada,iyadoo heysata ama difaacaneysa koobka Champions League-ga, waxaana ay haatan aadeysaa oo ay ka cayaari doontaa koobka Europa League.
Chelsea ayaa haatan ka awood yar xilli ciyaareedki hore, waxaana guuldarrooyinka xilli ciyaareedkan lagu tilmaamayaa inay sabab u tahay gooldhaliye wanaagsan oo aysan heysan, dhinaca kalena kooxda Juventus ayaa u soo gudubtay wareegga 16-ka ee Champions League-ga marki ay hal iyo waxba kaga adkaadeen kooxda reer Ukrain ee Shakhtar Donetsk.
Goolka ay ku badisay kooxda martida ahayd ee Juventus waxa uu ahaa mid ay si qaldan isaga dhaliyeeen kooxda Shakhtar Donetsk, waxaana Group-ka E, kasoo baxay kooxaha Shakhtar Donetsk iyo Juventus.
Group- F, waxaa kasoo baxay kooxaha Bayern Munich iyo Valencia, oo guulo ka kala gaaray kooxaha Lille iyo BATE Borisov.
Bayern Munich ayaa 4-1 ugu awood sheegatay kooxda ka socotay dalka Russia ee BATE Borisov, halka kooxda Valencia ay si diqi ah hal iyo waxba kaga badisay kooxda reer France ee Lille Group G, waxaa kasoo gudbay kooxaha Barcelona iyo Celtic, Barcelona oo kal hore xaqiijisatay wareegga 16-ka ayaa xalay barbaro gool la,aan ah la gashay kooxda reer Portugal ee Benfica, halka kooxda Celtic ay 2-1 isaga reebtay kooxda ugu hooseysay Group-kan G, ee Spartak Moscow oo ka socotay dalka Russia.
Celtic waxa ay sidaasi ugu gudubtay wareegga 16-ka.
Group H, ayaa waxaa ka soo baxay kooxaha Manchester United iyo Gatalasaray Kooxda Gatalasaray ayaa hal iyo waxba kaga adkaatay kooxda Manchester United oo ay marti ugu ahayd garoonka Old Trafford, waxaana ay guushaasi u sahay inay iska xaadiriso wareegga 16-ka, halka kooxda Manchester United ay mar hore xaqiijisatay, maamada aysan waxba u dhimin guuldarradi xalay soo gaartay.
Xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa xalay dhaawac kasoo gaaray cayaarti ay kooxdisa barbaraha gool la'aanta la dhaafi weyday kooxda Benfica Messi ayaa garoonka looga saaray bareelo, marki uu dhaawac kasoo gaaray jilibka bidix, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaa in dhaawaca Messi uusan ahayn mid daran.
Kooxda Barca ayaa sheegtay inay baaritaano dheeraad ah ku sameyn doonaan dhaawaca soo gaaray xididooda Messi, waxaana ay tilmaameen inuusan weyneyn nabarka soo gaaray Messi Dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan Messi ayaa marki hore laga cabsi qabay inuu ahaa jab, maadama garoonka looga saaray bareelo.
Laacibkan reer Argentina ayaa waxaa hal gool kaga xiga inuu jabiyo rigoor uu sameeyay Gerd Mulleir 1972-ki, waxaana uu heystaa afar kulan oo uu ku dhalin karo, lakin hadi baaritaanada lagu sameynayo dhaawiciisa uu qaato todobaadyo waxaa laga yaabaa inay saameyso,.
Ugu dambeyntiina kooxda hantiilayaasha carbeed ee Manchester City ayaa doonaya weeraryahanka awoodda badan ee kooxda P.S.G Slatan Ibrahimovic Macalinka kooxda Man.City Roberto Mancini ayaa sheegay in bisha janaayo ay dalab u dirsan doonaan kooxda lacagta badan ee P.S.G si ay u weydiistaan ciyaaryahankooda Ibrahimovic Mancini ayaa laacibkan reer Sweden ee Ibrahimovic u arka inuu ka caawin kara guuldarrooyinka kasoo gaara cayaaraha Champions League-ga.
Isku soo wada duuboo isku aadka Champions League-ga Ayaa waxa la isku aadin doonaa kooxa u soo baxay wareega labaad Maalinta Jimcaha ah.